रोचक – Samabeshi Khabar
१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १२:५०१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १२:५०१४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार १२:५० by Samabeshi KhabarNo Comments
सानो नाकको डण्डीफोर निचर्दा भयो अचम्मको अनुहार ?
प्रमुख समाचार, रोचक
काठमाडौं, (ससं) । सोच्नुहोला की कसरी हुन्छ ? सानोे डन्डिफोर निचोर्दा यस्तो भनेर तर साच्चैनै फिलिपिन्सकी एक किशोरी मेरी यान रेगा चोले नाकमा आएको डण्डीफोर निचोरेपछि अहिले उनको अनुहार सुन्नि एर बेलून जस्तै भएको छ । नाकको छेउमा आएको सानो डण्डीफोर निचोरे पछि सुन्निँदै गएको र अनुहारभरि फैलिँदै गएको हो । र अहिले आँखा समेत हेर्न गाह्रो परेको छ । रेगाको नाकमा डण्डीफोर लामो समयदेखि थियो र उनले हर्मोनका कारण त्यसो भएको ठानिन् । गएको सालमा मात्र उनले छोरो जन्माएकी थिइन् । गर्भवती भएपछि छालामा समस्या आउने उनलाई थाहा थियो । अति नै भएपछि उनले डण्डीफोर निचोरिन् । त्यसको केही दिनपछि उनलाई अलिअलि दुख्न थाल्यो र बिस्तारै दुखाइ बढ्दै गयो र अनुहार सुन्निन थाल्यो । उनले यसलाई रोक्न आयुर्वेदिक उपचार गरिन् तर त्यसको कुनै असर परेन । उनका श्रीमान “अल्बर्ट सालेस” छिमेकीको घरमा पार्टटाइम काम गर्छन् । उनीहरूको ...
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:३७१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:३७१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:३७ by Samabeshi KhabarNo Comments
अचम्म ! एउटा भ्यागुताको मुल्य २ लाख ३२ हजार भन्दा बढि
काठमाडौं, (ससं) । के तपाईंलाई संसारको सबैभन्दा विषालु भ्यागुताबारे थाहा छ ? कतिपय लाई त थाहा हुन पनि सक्छ यो भ्यागुता विश्वभरि तस्करी गरिन्छ । उक्त भ्यागुता यति विषालु छ कि यसले १० जना मानिसलाई मार्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कालो बजारमा यस प्रजातिको भ्यागुताको मूल्य २ लाख ३२ हजार रूपैयाँ भन्दा बढि रहेको छ । आखिर किन ती भ्यागुत्ताहरुको तस्करी गरिन्छ ? अब, तिनीहरूलाई बचाउन कुन अभियान भइरहेको छ ? भ्यागुताको यस प्रजातिको नाम पोइजन डार्ट फ्रुग हो । यो लोपोन्मुख प्रजातिको भ्यागुता हो । सामान्यतया यी भ्यागुताहरू पहेंलो र कालो रंगका हुन्छन्। केहि हरियो–उज्यालो सुन्तला र केहि नीलो कालो हुन्छन् । यस भ्यागुताको विषको कारणले, यो विश्वभर तस्करी गरिन्छ । सामान्यतया यी भ्यागुताहरू १.५ सेन्टीमिटर लामो हुन्छ तर केहि ६ सेन्टीमिटरसम्म लामो हुन्छन् । औसत तौल २८ देखि ३० ग्राम हुन्छ । तर तिनीहरू भित्र एक त्यस्त...
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:१५१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:१५१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १४:१५ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । हामीलाइ अचम्म लाग्न सक्छ कसरी हुन सक्छ यस्तो भनेर । विहे गर्दा केटा र केटीबीचको उमेर अन्तर कति हुन्छ होला ? सामान्य रुपमा हेर्दा धेरैमा १५ देखि २० वर्षसम्मको अन्तर कतै कतै देखिन्छ । तर पाकिस्तानबाट एक स्तब्ध पार्ने खबर बाहिर आएको छ । यहाँ एक ६० वर्षीय व्यक्तिले १४ वर्षीया बालिकासँग विहे गरेका छन् । धार्मिक राजनीतिक पार्टी जमीयत उलेमा ए इस्लाम बलूचिस्तानका सांसद मौलाना सलाहउद्दीन अयूबीले एक १४ वर्षीया बालिकासँग विवाह गरेको खबर पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको छ । यो घटना केही समय पुरानो हो । पहिले पनि यस घटनामा छलफल भएको थियो तर यो पक्का हुन सकेको थिएन । अब भने एक एनजीओको अपीलमा प्रहरीले यस घटनाको बारेमा फेरि अनुसन्धान थालेको छ । बालिकाका बाबुले पनि विवाह भएको पुष्टि गरेका हुन् । पाकिस्तानमा महिलाहरूको विवाहको उमेर १६ वर्ष तय गरिएको छ । यदि यो भन्दा सानो उमेरमा विव...
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १६:४५११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १६:४५११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १६:४५ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाण्डौं, (ससं) । सुदुर पश्चिमका विजेन्द्र रावतसँग विबाह बन्धनमा बाँधिएकी नायिका श्वेता खड्का अब आमा बन्दै छिन् । उनी रियल लाईफमा नभई रिलमा आमा बन्ने भएकी हुन् । चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री श्वेता खड्काले नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने भएकी छन् । उनी अभिनीत चलचित्र ‘कान्छी’ दुई वर्षअघि प्रदर्शनमा आएको थियो । अहिले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिँदै आएकी उनी यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्रमा अनुबन्धित भएकी हुन् । ‘हुर्रे’, ‘मेरी मामु’ र ‘रज्जा रानी’ निर्देशन गरेका यमको निर्देशनमा बन्ने नयाँ चलचित्रमा श्वेताले काम गर्न लागेकी हुन् । चलचित्रमा उनी आमाको भूमिकामा देखिने छिन् । चलचित्रले आमा र छोरीको भावनात्मक सम्बन्धको कथा भन्ने छ । कोरोना महामारी र लकडाउनको अवस्था सहज हुनेबित्तिकै चलचित्रको छायांकन सुरु हुने बताइएको छ । चलचित्रम...
२८ माघ २०७७, बुधबार १३:३४२८ माघ २०७७, बुधबार १३:३४२८ माघ २०७७, बुधबार १३:३४ by Samabeshi KhabarNo Comments
काठमाडौं, (ससं) । पपुवा न्युगिनीको मोरोब पहाडि क्षेत्रका भिरहरुमा झुण्डाइएका लासहरु मुस्कुराए जस्ता लाग्छन् । सुकुटी बनाएजस्तो गरी आगोमा पोलेर राखिएका लासहरु वर्षौँ पुराना समेत छन् र केही आलो पनि । लासको बाहिरी भागमा रातो दलिएको छ र ती लास बाँसका पिंजडा भित्र राखिएका छन् र झुण्डाइएका छन् । उक्त आदिवासी इलाकामा पुग्ने जो कोही बाहिरिया मान्छे जताततै झुण्डिएका लास देख्दा डराउनु स्वभाविकै हो । तर दुर्गम भेगका ती आंगा आदिवासीका लागि भने लासको यस्तो अवस्था निकै गर्वको विषय हो । उनीहरुका लागि लासलाई यसरी राख्नु भनेको मृतक प्रतिको सबैभन्दा ठूलो श्रद्धा हो । मानिस मरिसकेपछि उसको सरीरलाई मज्जाले आगोमा पोलिन्छ । सिपालु मलामीले पैताला, घुँडा लगायतका ठाउँहरुमा काटेर सरीरभित्रको बोसो थुत्छ । त्यसपछि लासको मलद्धारबाट बाँसको एक टुक्रा घुसाएर निकालिन्छ । उक्त बाँसको लट्ठीमा टाँसिएर आएको पदार्थ उनीहर...
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:४७२८ माघ २०७७, बुधबार ११:४७२८ माघ २०७७, बुधबार ११:४७ by Samabeshi KhabarNo Comments
११६ वर्षकी महिलाले जितिन कोभिड -१९ संक्रमण
काठमाडौं, (ससं) । फ्रान्सकी ११६ वर्षकी महिला कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण जित्न सफल भएकी छिन् । फ्रान्सेली नन लुसिली रान्डनले सन् १९४४ मा सिस्टर एन्ड्री नाम लिएकी थिइन् । उनले ११७ औँ जन्मदिनअघि कोरोना संक्रमण जितेर घर फर्किएकी हुन् । जनवरी १६ मा उनी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको थियो । उनमा कुनै लक्षण भने देखिएन । आफू संक्रमित भएको आशंका समेत नगरेको उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई बताएकी छन् । तोउलोनमा रहेको रिटायरमेन्ट होममा बस्दै आएकी उनलाई संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेशनमा राखिएको थियो । हाल उनी पूर्ण रुपमा संक्रमण मुक्त भएकी छन् । सन् १९०४ को फेब्रुअरी ११ मा जन्मिएकी उनी युरोपकी सबैभन्दा पाको उमेरकी व्यक्ति समेत हुन्।...
२८ पुष २०७७, मंगलवार २२:४४२८ पुष २०७७, मंगलवार २२:४४२८ पुष २०७७, मंगलवार २२:४४ by Samabeshi KhabarNo Comments
एजेन्सी, ब्रिटेनका ग्राहम पावले सबै कुरा बुझ्छन् तर कुरा फर्काउन खोज्छन तै पनि असमर्थ हुन्छन् । उनले हरेक चीजको जवाफ एस र नो मात्र दिन्छन् । एस, नो को साथै हामी र अर्रर पनि भन्छन् । तर अरु शब्दभने जति भन्न खोजेपनि भन्न सक्दैनन् । उनलाई २०१३ मा एफासिया स्ट्रोक भएको थियो, त्यसपछि उनी राम्रोसँग पढ्न र लेख्न सक्दैनन् । तर हाल भने अरु मानिसको साहारालेभने केही कुरा बुझ्न सकिन्छ । उनको दायाँ हात चल्दैन र दायाँ खुट्टापनि राम्रोसँग हुँदैन् । यसको कारण दुखाइृ हुन्छ । यो स्ट्रोक वा आघात त्यो समयमा हुन्छ, जुन समयमा दिमाखसम्म जाने ब्लड सप्लाई बन्द हुन्छ । प्राय यस्तो रक्त वाहिकामा रगत जमेको कारण हुन्छ । आघातले दिमागको धेरै भाग प्रभाव पारेको हुन्छ । करीब सबै जिन्दगीको लागि घातक हुन्छ । ग्राहमको पनि हालत त्यस्तै छ । स्ट्रोक पिडित व्यक्तिहरुमा कुराकानीमा समस्या हुन्छ । बिरामीले व्यक्तिले कुन शब...
२७ पुष २०७७, सोमबार १९:०७२७ पुष २०७७, सोमबार १९:०७२७ पुष २०७७, सोमबार १९:०७ by Samabeshi KhabarNo Comments
अनुष्का शर्माले छोरीलाई जन्म दिइन्
काठमाडौं, (ससं)। बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले छोरीलाई जन्म दिएकी छिन्। मुम्बईस्थित ब्रीच क्याण्डी अस्पतालमा उनले छोरी जन्माएकी हुन्। क्रिकेटर विराट कोहलीसँग २०१७ डिसेम्बरमा विवाह गरेकी अनुष्काले पहिलो सन्तानको रूपमा छोरीलाई जन्म दिएकी हुन्। विराटले सामाजिक संजालबाट आफूहरूलाई पुत्री लाभ भएको र अनुष्का र छोरीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको जनाएका छन्। विराटले छोरी पाएको एकदमै खुशी रहेको भन्दै केही समय गोपनियतामा ध्यान दिन सबैमा आग्रहसमेत गरेका छन्। अनुष्काले गत अगष्टमा आफू आमा बन्न लागेको बताएकी थिइन्। अनुष्का र विराट दुवै जनाको तस्बिर सेयर गर्दै २०२१ को जनवरीमा आफ्नो घरमा नयाँ सदस्यको आगमन हुने र आफूहरू पनि तीनजना हुने बताएका थिए। ...
२४ पुष २०७७, शुक्रबार २२:१८२४ पुष २०७७, शुक्रबार २२:१८२४ पुष २०७७, शुक्रबार २२:१८ by Samabeshi KhabarNo Comments
टिप्स हरेक महिला र पुरुष बीच छुट्टै किसिमको सम्बन्धको सुरुवात हुन्छ । महिलाहरुले सामान्यतया पुरुषमा केही त्यस्ता कुरा खोज्ने गर्दछन् । जुन कुराले उनीहरुलाई भित्रैबाट आकर्षित गराउँदछ । यस्ता कुरा पाए भने महिला पुरुषसँगको सम्बन्धमा खुशी र सन्तुष्ट हुने गर्दछ । पुरुषमा तल उल्लेखित गुणहरु महिलाने चाहन्छन् लुक्स र आकर्षण : हुन त दीर्घ स म्बन्धमा स्वभाव प्रधान हुन्छ तर आफ्नो पुरुषको आकर्षक लुक र ब्यक्तित्व पनि महिलाको चहाना हो । पुरुषको स्किन कलरले समेत महिलालाई प्रभाव पार्ने कुरा भएको बताइन्छ । मुस्कान : राम्रो लुक र पहिरन पछि महिलालाई चाहिन्छ हँसिलो अनुहार । कुनै पनि पुरुष हँसिलो अनुहारसहित प्रस्तुत हुन्छ भने उप्रति महिला आकर्षित हुन्छे । स्वभाव : कुनै पनि सम्बन्धको शुरुवात बाहिरी सुन्दरताबाट हेरिन्छ तर सम्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ । खासमा सम्बन्धको आयु सुन्दर...